Envoy ဂျာနယ်လုပ်ကြံသတင်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီးအဆိုတော်လေးဖြူကြေငြာချက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » Envoy ဂျာနယ်လုပ်ကြံသတင်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီးအဆိုတော်လေးဖြူကြေငြာချက်
Posted by chityimhtoo on Mar 30, 2012 in News | 15 comments
လေးဖြူနှင့် Iron Cross ပရိသတ်များသုို့ …………….
ဂျာနယ်တစ်စောင်တွင် ဖော်ပြထားသော လေးဖြူ၏ အင်တာဗျူးမှာ အမှန်တကယ် မေးမြန်းဖြေဆုိုထားခြင်း လုံးဝ(လုံးဝ) မဟုတ်ပဲ ရည်ရွယ်ချက်ရှိစွာဖြင့် လုပ်ကြံဖန်တီးထားခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ တရားဥပဒေကြောင်းအရ အမြန်ဆုံး ရင်ဆုိုင်ဖြေရှင်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
30-3-2012 ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံ သတင်းစာ စာမျက်နှာ 12 အောက်နား ညာဘက် ထောင့် မှာပါ .. ဦးဘလက်ရေ …
ခင်ဗျာ ဘယ်ကိုပေးပေးမပေးပေး စိတ်မ၀င်စားပါ၊
ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာဗျာ ROCKER ဆိုလို့ ခင်ဗျား အပါအ၀င်
နဲနဲ ပဲရှိတာ၊ အနုပညာသမားတယောက် အနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့
အပါအ၀င်၊အားလုံးက ငတ်မွတ်နေတဲ့ ရော(ခ်) ဂီတ စစ်စစ်…
၄င်းတေးသွားလေးတွေနဲ့ ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းချင်တယ် တကယ်ပါဗျာ…
ရောခ် သီချင်းအစစ်တွေ ကျွန်တော်တို့ ပရိတ်သတ် ကိုပေးရင်
ခင်ဗျား ပေးချင်တဲ့ အစစ်အမှန်ကို ပေးတာနဲ့တူတူပါပဲဗျာ..
ဘ၀က တိုတိုလေးပါ ကိုလေးဖြူ ….
envoy ဘက်ကို ပိုယုံကြည်ပါသည်။
envoy က မမေးဘဲနဲ့တော့ သူတို့ထည့်ရဲ ပါ့မလား ။
မေးပြီးတော့မှ သာ သူတို့ထည့်ချင်တဲ့ အပိုင်းလေးဘဲ ကွက်ထည့်တာ ထင်ပါသည်။
မန်းဒလေးဂေဇက်ဂျာနယ် ဆိုပြီးထွက်လာမှ သိမယ်
မည်သူမဆို မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပါတီကို မဲထည့်တာကိုတော့ လုံးဝ မဆန့်ကျင်ပါဘူး
ဒါပေမယ့် ဒီလိုအောက်တန်းကျတာကတော့ တော်တော်စောက်သုံးမကျတာဘဲ
တစ်လောကတုန်းက IC မိသားစုတွေ အဖွားကြီးဆီသွားပြီး ဘာညာကွိကွသွားလုပ်ကြတာဟာ
အဖွားကြီးပါတီကို ကြီးကျယ်တဲ့ အားပေးမှု့ကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာ အနှီးခွေးမသားကြက်ဖွတ်တွေ
လေးဖြူ ( ကိုလေးဖြူ ) အနေနှင့် သတိထားသင့်တယ်
ဒီခွေးမသားတွေ မိန်းမကျင့်မိန်းမကြံ ကြံစည်တဲ့ဂွင်ထည်းဝင်သွားတတ်တာလေးပါ
လွန်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေတုန်းက အကော်ဒီယံအုန်းကျော်ဆိုတဲ့ နွားကြီးက ( ကျုပ်အဘထက်တောင်ကြီးတယ် )
သန်းရွှေတို့ ခင်ညွှန့်ကို ဘုရင့်နောင်အနော်ရထာ ဝိညဉ် တစ်ကြော့ပြန်ပြီးရှင်သန်လာသလား
ဘာလား ညာလား ဆိုပြီး ကပ်ဖားယပ်ဖားလုပ်ပြီးရေးတဲ့
မဟာ ဆိုတဲ့ ခွေက ပါဝါ45 ကို မနိုင်လို့ လီးလိုမှုလိုလုပ်ပြီးပြီ
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျုပ်လည်း ခု ဒီကောင်တွေကိုဆော်ဘို့
အပျင်းစားဟဲဗီးရော့ သီချင်းတစ်ခွေ စီစဉ်နေတယ်
မျှစ်ကိုစားပြီး ဝါးမှန်းမသိတယ် ဆိုတဲ့ အလယ်ဘဂံပါ
အခု ကွန်မင့်ကိုဖတ်ပြီးမှဘဲ ၊ “မဟာ” ကို သဘောပေါက်မိတော့သဗျာ ။
လေးစားပါတယ် ကိုပု ။
ပါဝါ45 ကို ကျုပ်ဆိုင်ကပြန်သိမ်းသွားလို. အစာမကြေဖြစ်နေတာ။
ဂျာနယ်ကတော့ ဒီကိတ်စမျိုးကို မဟုတ်ပဲ မထဲ့ရဲပါဘူး….
ဟုတ်ဘူး…။ သတင်းစာ စောင့်ဖတ်ရမှာ..။
အဟေးဟေး …. ဖွတဲ့ဂျာနယ် … စာဖတ်သူတွေကို သတင်းမှန်မရေးပဲ လိုရာဆွဲရေးတဲ့ဂျာနယ် .. ဘယ်လိုဖြေရှင်းချက်မျိုး ထွက်လာမလဲ စောင့်ကြည့်ချင်သေးတယ် … ။
ကိုလေးဖြူရေ …. ဟိုဂျပန်လက်သစ်မ မင်းသမီးသတင်းလိုတော့ မလုပ်နဲ့နော် …
ဟိုးလေးတကျော်ကျော် တရားရုံးတွေ အဆင့်ဆင့်တက်ပြီးမှ … တစ်ထောင်တန်ဒဏ်ရိုက်ခံရသလိုတော့ဖြစ်နေဦးမယ် .. ဟဲဟဲ
31-March-2012 ထုတ် ကြေးမုံ သတင်းစာ မှာ တောင်းပန်လွှာ ပါလာပါပြီ။ ဖုန်း နဲ့အင်တာဗျူး တာပါတဲ့ :???: :???: သဘောရိုးနဲ့ မို့ ဂျာနယ် က တောင်းပန် ပါတယ် တဲ့ဗျာ။
စာမျက်နှာ 12, ညာဘက် ဒေါင့် အောက်နား လေးမှာပါ။ … အဟီး ကျန်ခဲ့လို့
Mလုလင်ေ၇ ။ကြေးမုံတော့ မဖတ်ရသေးဘူး ။ဖုန်းနဲ့ ဗျုးတာဆိုတော့ လေးဖြူက ဘယ်သူမှ မလာ ဘူး ပြော တော့ လည်း အမှန်လိုပါလား … လက်တစ်လုံး ခြားတွေ ….
ကြေးမုံ လက်လှမ်းမမီနိုင်သော အဝေးရောက်နေသူများဖတ်နိုင်ဖို့ ။
အဆိုတော် လေးဖြူသို့ တောင်းပန်ခြင်း
Envoy News Journal ( သတင်းတမန်) အတွဲ (၂)၊ အမှတ် (၄၉) စာမျက်နှာ ၂၈ ၊ Entertainment တွင် အဆိုတော် ကိုလေးဖြူ နှင့် ပါတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်တချို့ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ သတင်းအချက်အလက်များမှာ Envoy News Journal(သတင်းတမန်) မှ သတင်းထောက် ဒေါ်နှင်းသီတာအေး (နေနှင်း) မှ ဖုန်း-၀၉-၈၀၃၀၄၂၇ သို့ Envoy News Journal( သတင်းတမန်) ၏ ရုံးဖုန်းဖြစ်သော ဖုန်း ၀၁-၅၁၂၇၇၁ မှ တစ်ဆင့် မတ်လ၁၉ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၀န်းကျင်တွင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ တစ်ဖက်မှ ပြန်လည်ဖြေကြားသော အချက်အလက်များသာ ဖြစ်ပါသည်။
သို့ရာတွင် အဆိုပါအချက်အလက်များမှာ လုံးဝ မှန်ကန်ခြင်းမရှိပါကြောင်းကို အဆိုတော်ကိုလေးဖြူ၏ တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေကြီး ဦးအောင်သန်းစိုးက အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့လာသည့် အပြင် ၃၀-၃-၂၀၁၂ ရက်ထုတ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင်လည်း အဆိုတော်ကိုလေးဖြူကိုယ်တိုင် အများသိစေရန်ဟု ကြော်ငြာ ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
သို့ဖြစ်ရာတွင် Envoy News Journal (သတင်းတမန်) အတွဲ(၂) အမှတ် (၄၉) ၊စာမျက်နှာ ၂၈ Entertainment တွင် ဖော်ပြခဲ့သော သတင်း အချက်အလက်များအား လုံးဝ မှန်ကန်ခြင်း မရှိကြောင်း အဆိုတော်လေးဖြူက သဘောရိုးဖြင့် ကန့်ကွက်သည့် အတွက် ထို သတင်းအချက်အလက်များကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းကြောင်းနှင့် ယင်း သတင်း အချက်အလက်များဖော်ပြ မိခဲ့သည်ကို Envoy News Journal (သတင်းတမန်) အယ်ဒီတာအဖွဲ့ နှင့် Entertainment တာဝန်ခံဖြစ်သော ကိုတ၀မ်းပူ တို့မှ အဆိုတော် ကိုလေးဖြူအား အနူးအညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါသည်။